Education and infrastructure development — Fursad Fund
31st January 2016 Education and infrastructure development
31st January 2016 Fund Fursad Targets Target
11 Comments on “Education and infrastructure development” M.yare
23rd February 2016 at 1:53 am
Madama aad dad soomaaliyeed wax tareysaan oo àad la macamilltameysaan web ka waa inaad u isticmaashaan lu qada soomaaliga waana mahadsantihiin
Walaal hawshiisa waa socotaa. Insha Allaah dhawaan ayuu hawada soo galayaa.
Su aalo qaar oo aan horay u qabay halkaan jawaabahooda ka arkay sida priority GA ee ay u kala leedahay wax qabadka fursad fun lkn wali uma jeedo meel ay ku caddahay cidda masuulka ka ah sanduuqa?
Sida uu qof walba waxa uu bixiyo uu u ogaanaaayo in transparent yihiin? Iyo policy GA idinkaga dagan kala hormarinta 3 priority?
Runtii aad baan u taageersanahay in ummadda Soomaaliyeed ay wax is tarto oo laga baxo gacmaha shisheeye. Waa barnaamij qaaliya, waa sadaqo, waa hawl dhan oo laga furtay meelo badan oo ay waajib ku noqon lahayd. Runtii waa in hawshan inta hadda ay tahay looga harin oo la sii horumariyaa, la qorsheeya oo loona qaabeeyaa shanta sanno, afartana sanno amma tobanka sanno ee soo socda. Fursad Fund waxaan kula talin lahaa in la sii balaadhiyo, gobolada, deegaannada iyo goobaha mashruucu in uu gaadho la rabo
Si in badan loo fahmo ujeeddooyinka, waxqabadka iyo higsiga Fursad Fund waa in Afka hooyo lagu qoraa barnaamij kasta amma hawl walba oo la qaban rabo. Aad baad u mahadsantihiin, wanan idinku bogaadinayaa hawsha aad waddaan.
Mohamed Abdirisaq Nor
fursad waxaan ugu hanbalyeynaya shaqada ay uqabteen dhalin yarro badan fikradoodi oo ay urumeeyey shaqada waan inala wadeynaa inta nolosha ay nagu jirto halkan waxa inaga hanbalyeynaya dhalinayaro badan oo kunool dalka india gaaar ahaan Magalada Pune .
waxaan ku darsaneyna oo nola muuqdey fahanka dadka ka qayb qadanaya ay dhibi ku noqon karto luuqada ku qor ma ino fiicnah inuu uu si fido dad kale oo so boqana website ka si ay uga dalacdaan war bixinta marka labada kuwada qorra lkn xoojinta waxad saartan luqadeena hooyo Mahadsanidiin Dhamaantin
Dhalinta india -Pune
27th February 2016 at 2:34 pm
Aad ayaan umahadinaya dhamaan dadkii soo abaabululay kana soo burqatay firkirkan somali oo dhan soo dhawaysa alle sida soomaali usoo dhawaysay ha udeeqo talo aan ku darsanaya waxa weeye in ay is waafaqaan hadalka ladhahayo iyo ficilka lasamaynaya wayo somali waa ku daashay balan qaaad alle ha idinla garab galo mashruucan anana hadaan somali nahay wan idin garab taaganahay guulaysta hana daalina Shafiei,
27th February 2016 at 6:49 pm
Ascww.walaalayaal aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin furitaanka aad furteen maanta mashruucaan qaybtiisa Muqdisho waxaana rajaynayaa inaan si hufan uga qayb qaadan doono haduu ilaahyiraahdo waadna mahadsantihiin daddaalkiina meesha kasii wada anagana waan idiin garabtaaganahay duco iyo garab istaagba iinshaalaah.
Asc dhamaan howl wadeenada mashruucan waad ku mahadsantihiin shaqada aad heysaan ilaah ha ka dhigo mid guul lkin afka soomaliga ayaa la rabay in aad kow ka dhigtaan maadama dadka soomaaliyeed la rabo in ay ka qeyb qaataan
Fursad Fund waa guul
Mahadsanidiin halkaas ka siiwada waan idin garab taaganahay
Ass.cal. wa raxmatullaahi wa barakaatuhu. Allaha idiinku guuleeyo. Waa fikrad iyo mashruuc qaali ah. Ugu horeyn adeegsiga af soomaaliga ha la adkeeyo. Waa aqoonsiga soomalida. Hana la adeegsado xayeesiinta mediyaha. Kolley waa kasoo qayb galaynaa.
Ali Mohamed Nur
10th April 2016 at 11:49 am
waxaan u hambelyaynaa intii wanaaga u istaagtay ilaahayna waxaan ka baryaa in uu ka dhigo dadaal daacad ah. waxaan kaloo ku dhiirigalinaa Somalida in aan la is dhaliilin ee la isku taageero wanaaga iyo horumarka… Ilaahay halaga cabsado oo intii wax qabad u istaagtay yaan la niyad jabin ayakana haloo duceeyo.
intaas kadib ani waxaan soojeedin lahaa laba arin:
1. In la sameeyo Fund manager madax banaan si transparency level-ka kor luugu qaado
2. in la bilaabo implementation-ka si lacag aysan si macna dara ah account isaga jirin(Time Value of money)ayadoo waliba wixii la fuliyo loo isticmaali karo as success story and to clear doubt in some people’s minds.
Mahadsanid Cali walal, Horaanta bisha Juun ayaan bilaabi doonaa waxqabadka, wax walba waxa ay u baahanyihiin qorshayaal, midda ah in Fund Manager ka madax banaan la sameeyo FUrsad Fund, waa wax fiican wayna ku jirtaa qorshaha Fursad Fund in marka mashruuca koowaad uu bilowdo la sameeyo.